ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန်းကြယ်၊အံ့သြဘွယ်ရာများနှင့် လူ၊နတ်၊ စတြ၀ဌာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
စာအုပ် - Mar 2011 တွင် ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားသည်။ ၀ယ်ယူရန်နေရာများ။ မလေးရှား၊ ခမ်းမြင့်စာအုပ်ဆိုင် (မြေညီထပ်) တအုပ် RM12.00, စင်ကာပူ၊ မေမြန်မာ (လေးထပ် #04-03, Peninsula Plaza) တအုပ် S$5.00
1. ယေရှုတစ်ပါးတည်းသာ သေခြင်းကို
Read more: ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန်းကြယ်၊အံ့သြဘွယ်ရာများနှင့်...
ရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေ - မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်
Read more: ရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေ - မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်
မိုင်ယိုနီးစ် ပုလင်းနဲ့ ကော်ဖီ(၂)ခွက်
သင့်ဘ၀မှာ အရာရာဟာ ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ် ရတာခက်ခဲနေတယ် ဆိုရင်၊ တစ်နေ့မှာ ရှိတဲ့ (၂၄)နာရီဟာ သင့်အတွက် မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ ထင်တယ်ဆိုရင် “Mayonnaise ပုလင်းနဲ့ ကော်ဖီ(၂)ခွက်”ကို သတိရလိုက်ပါ။
ပါမောက္ခကြီးတစ်ယောက်က အတန်းရှေ့မှာ ရပ်နေပြီး သူ့ရှေ့မှာ ပစ္စည်းတစ်ချို့ လည်းချထားပါတယ်။
Read more: မိုင်ယိုနီးစ် ပုလင်းနဲ့ ကော်ဖီ(၂)ခွက်
အမှိုက် The Law of Garbage Truck
တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေ အင်းစိန်ကို တက္ကစီကားလေး တစ်စီးငှားပြီး ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။ တက္ကစီကားသမားက စိတ်မရှည်တဲ့အတွက် လမ်းခုလတ်မှာ ကားတိုက်ဖို့ သုံးခါကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သုံးခါစလုံး တစ်ဘက်ကားသမားတွေက မှားတာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ ကားသမားကဘဲ ဒိုင်ခံ မှားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more: အမှိုက် The Law of Garbage Truck
လမ်းသာမှအိမ်ပြန်မည်၊ I wonder as I wander & I AM NOT ASHAMED TO BE A REFUGEE
Rev. Dr ဆိုင်မွန်သာ
သွေးဆောင်ငြားလည်း.. ၊ ကျွနိုပ်လုံးဝအိမ်မပြန်ချင်ပါ၊
.. ဖိနှိမ့်ညှင်းပမ်း၊.. လူသားမဆန်
.. မတရားအုပ်စိုး၊.. လူတန်ဘိုးမထားဘဲ
Read more: လမ်းသာမှအိမ်ပြန်မည်၊ I wonder as I wander & I...
နှ လုံး သား အိမ် မှ စာ စု များ နှင့် ယုဒဿန် JBC Media စာစောင်
လွန်ခဲ့သော ၁၂နှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော ဆရာစောသြဂတ်စတတ်၏ နှလုံးသားအိမ်စာစုများမှ အချို့နှင့် မီဒီယာဆောာင်းပါးအချို့ကို ကောက်နုတ်ထုတ်ဝေပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
Read more: နှ လုံး သား အိမ် မှ စာ စု များ နှင့် ယုဒဿန် JBC...
The Lord's Word မတ်လ ၂၀၁၁၊ အမှတ်စဉ် (၁၁၅)
သခင့်စကား ၀ိညာဉ်ရေးရာစာစောင် Mar-2011
ကဗျာ၊ နှလုံးသာခြင်း-၂ (မင်းအောင်သက်လွင်)၊ ရှက်သေးရင်မချစ်သေးလို့ပါ (Samuel Soe Lwin)၊ ဆောင်းပါးများ၊ နေအာရုဏ်သည်တောင်ထိပ်တို့ကိုနှံပြားသကဲ့သို့ (မလွမ်းသူ-ပဲခူး)၊ "Sweet December နှင့် happy new year" (ပန်းနုရောင်-တောင်ငူ)၊
Read more: The Lord's Word မတ်လ ၂၀၁၁၊ အမှတ်စဉ် (၁၁၅)
ဓမ္မပညာအထောက်ကူပြု လစဉ်စာစောင် မတ်လ ။ ၂၀၁၁
Pulpit & Bible Study Helps
ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောပါ (ညီအစ်ကိုကြီး Dr.တင်မောင်ထွန်း)၊ သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ကိုတည်ဆောက်ပါ (ညီအစ်ကိုဦးကပ်ခန့်ခုပ်)၊ ပြည့်စုံချိန်လည်းမရွှေ့ရ (ညီအစ်ကိုဦးညွန့်လှ)၊ ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရဖို့
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်ကူပြု လစဉ်စာစောင် မတ်လ ။ ၂၀၁၁
Read more: သင့်လက်ထဲက လိမ္မော်ချိုလေး တစ်စိပ်
ပန်းချီကားချပ်ထဲသို့ ခရီးသွားခြင်း -
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၏ အလှကျက်သရေဆောင်ဖြစ်သော ကမ္ဘာကျော် ရွှေတံခါးတံတားကြီး (Golden Gate Bridge)သည် ဖွေးနုလှပပြီး ဂွမ်းဆိုင်ခဲနှင့်တူလှသည့် နှင်းမူန်များအကြား ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်ထင်ပေါ် လှပလျှက် ရှိနေသည်ကို မြင်ရပြန်သောအခါ ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ထပ်မံ ချီးမွမ်း မိသည်။ ငယ်စဉ်ချိန်ခါတုန်းက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ၊ စာအုပ်ထဲမှာ၊ သီချင်းထဲမှာသာ မြင်ဘူးကြားဘူးတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော် ကိုရောက်လာသည်မှာ ဘာလိုလိုနှင့်တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပင် ပြည့်ခဲ့ပြီ။ အရှည်ဆုံးတံတားဖြစ်တဲ့ Bay Bridge ပေါ်ကိုရောက်တယ် ဆိုရင် ဘဲ ကျယ်ပြောလှတဲ့ပစ္စိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်ကျယ်ကြီးကိုမြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ကျွမ်းကျင်လွန်းလှသည့်ပန်းချီဆရာ ချယ်မူန်းထားသောဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော်ပန်းချီကားချပ်ထဲသို့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်နေဘိအလားခံစားမိပြန် သည်။ ဪ တင့်တယ်လှပ ပေသကိုး။
Read more: ပန်းချီကားချပ်ထဲသို့ ခရီးသွားခြင်း -
ခရစ်ယန်တို့၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်များ Andrew Series 2008
ဆရာဦးအောင်နိုင်၏ စာအုပ်ဒေါင်းလုပ်ယူရန် - http://murann.com/ebooks/andrew.series.pdf
Love not the World လောကကိုမချစ်နှင့်
Jesus , the Lamb of God ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ယေရှုခရစ်
Jesus Our King Forever ကျွန်ုပ်တို့၏ အစဉ်အမြဲဖြစ်သော ဘုရင်ယေရှု
What is God Like ဘုရားသခင်သည်
Read more: ခရစ်ယန်တို့၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်များ Andrew Series...
ဆေးရုံပေါ်က အခန်းတစ်ခုမှာ နာမကျန်းတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်
Read more: ငါသည်သင့်ဖို့ - ဆလိုင်းအောင်မြင့်